Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny Akon’ny RuNet
Pejy 2 amin_ny 75
Tantara tamin'ny Akon'ny RuNet
02 Jolay 2019
Takiana ny Tinder ankehitriny mba hizara ny tahirin'ny mpiserasera any amin'ny manampahefana Rosiana
Mpanoratra Alexey Kovalev · Eoropa Afovoany & Atsinanana
Afaka mahazo ny tahirin'ny mpiserasera Rosiana ao amin'ny Tinder ankehitriny ny sampan-draharaham-piarovana Rosiana
25 Jona 2019
Ny raharaha Ivan Golonouv : Fotoana fohy firaisankina sy firohotana tao amin'i Rosia an’i Potinina
Mpanoratra Filip Noubel · Rosia
Maro no nitaky fandraisana andraikitra bebe kokoa amin'ny fanasaziana ireo mpitandro ny filaminana izay namoroporona ilay raharaha.
31 Mey 2019
Mpanoratra RuNet Echo · Eoropa Afovoany & Atsinanana
30 Avrily 2019
Nihantsy ny fampahalalam-baovao tsy miankina ny fampahalalam-baovaom-panjakana Rosiana noho ny fampiasana teny ‘tsy mitanila’ amin'ny tati-baovao momba ny ady amin'ny mpampihorohoro
Nandrehitra ny adihevitra momba ny fiteny "tsy maha-olombelona" tamin'ny tati-baovao momba ny fampihorohoroana ny siokan'ny RT. Niaro ny fanapahan-kevitry ny RT ireo mpomba ny fanjakana amin'ny fampiasana ny teny toy ny hoe "nofongorina" sy ny tsikerany tatỳ aoriana tamin'ny gazety izay tsy mampiasa izany.
22 Avrily 2019
Rosia: Miresaka ny tsingerintaona faha-20 nirodanan'ny rindrin'i Berlin ny bilaogera
Mpanoratra Alexey Sidorenko · Eoropa Afovoany & Atsinanana
Folo taona taorian'ny nianjeran'ny Rindrin'i Berlin, tsy dia maro ireo bilaogera Rosiana mahatsiaro, mankalaza sy miresaka ity zava-nitranga ara-tantara izay antsoin'ny sasany hoe "zava-nitranga tena manan-danja indrindra tamin'ny tantaran'ny taonjato faha-20." Ho an'ny ankamaroan'ny bilaogera Rosiana 'ny firodanana' dia fahatsiarovana avy amin'ny fahazazana / fahatanorana, zavatra angano fa tsy tena...
21 Avrily 2019
Naneho hevitra momba ny horohorontany tany Haiti ny bilaogera Rosiana
Horohoron-tany mahery vaika tany Haïti no nanjary loza voalohany manerantany tamin'ny taona 2010. Na dia lavitry ny loza aza ireo bilaogera Rosiana, dia nirohotra naneho ny fanohanan'izy ireo [RUS] ho an'ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany. Tsy ela dia nanjary iray tamin'ireo lohahevitra noresahana be indrindra tao amin'ny RuNet ny zava-doza tao Haiti.
20 Avrily 2019
Manampahefana voarohirohy ho nanao fihetsika mahery ara-nofo no alefan'i Rosia hitarika ny Vaomieran'ny Satan'ny Vehivavy amin'ny fivorian'ny Firenena Mikambana 2019
Raha jerena amin'ny fahalaviran'i Rosia amin'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy sy ny fiantohana ny miralenta, dia fandotoan-drindrina madiodio ny fanendren'i Rosia an'i Slutsky ho mpitarika delegasionam-pirenena.
Mpanoratra Veronica Khokhlova · Eoropa Afovoany & Atsinanana
14 Avrily 2019
Rosia: Bilaogera nosamborina noho ny tsahotsahon'ny pesta
Nosamborina tamin'ny 3 Desambra i Ivan Peregorodiev, mpianatra mpitsabo sady bilaogera 22 taona noho ny fanaparitahany tsaho momba ny pesta areti-tratra ao an-tanànan'i Saratov. Nampangain'ny manampahefana ho nampiely vaovao tsy marina mifandraika amin'ny asa fampihorohoroana izy.